OS X El Capitan Disk Utility တွင်ပြောင်းလဲမှုများ ငါက Mac ပါ
OS X El Capitan Disk Utility tool ကိုပြောင်းလဲခြင်း
OS X El Capitan အသစ်တွင် Cupertino ကုမ္ပဏီမှကြေငြာခဲ့သောအပြောင်းအလဲများကိုမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်လည်ပတ်နေသည့် operating system တွင်အနည်းငယ် ထပ်မံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေ interface အဆင့်မှာ features အသစ်တွေ၊ ဤအပြောင်းအလဲများသည် tool ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ သူတို့ဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထူးခြားပြောင်မြောက်လျှင်။ OSX Yosemite ရှိကလစ်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့်ရွေးစရာများအားလုံးသည်လက်လှမ်းမမှီသောကြောင့်ဤအသစ်အဆန်းသည် 'လုံခြုံရေး' ပေါင်းများစွာကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်၊ မှားယွင်းသောကလစ်နှိပ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖြေရှင်းပေးသည်။
ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်၊ ငါအောက်မှာချထားတဲ့ဒီ screenshots တွေနဲ့ကွဲပြားမှုဂိမ်းကိုကစားတာဟာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုကျွန်တော်တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုတွေ့မြင်ရလို့သူတို့ဟာတကယ်ကိုထူးခြားလို့ပါ။ ဥပမာ၊ အခန်းကန့်များကိုကြည့်ရှုရန် interface ကိုပြောင်းလဲ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ Format နာမည်၊ OS X El Capitan သည် OS X တိုးချဲ့ထားသောပုံစံကိုပြသသည်။ ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာရန်သင့်အားကျွနု်ပ်တို့ထားရှိပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ခြင်း OS X အယ်လ် Capitan beta ဗားရှင်းဗားရှင်းတွေဖြန့်ချိတဲ့အချိန်မှာ Apple ကအပြောင်းအလဲတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်တာသေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် eDisk Utility ကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဂရုတစိုက်နားထောင်ပြီးပထမ ဦး ဆုံး OS X 10.11 ဗားရှင်းနှင့်သတင်းများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုသင်အားလုံးမြင်တွေ့ရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » OS X El Capitan Disk Utility tool ကိုပြောင်းလဲခြင်း
Juan Jose သို့ပြန်ပြောပါ
ဒါပဲ……။ အတည်ပြုခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးရွေးချယ်စရာများဘယ်မှာ .... ???
ကျွန်ုပ်၏ဗားရှင်းတွင်၎င်းသည် "ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း" မပေါ်လာပါ။ သို့သော် "ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း" ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ပါကအပေါ်ကဓာတ်ပုံတွင်ပါရှိသည်။ CD-RW (သို့) DVD-RW discs တွေကိုငါဖျက်လို့မရဘူး။
Display Desktop ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
အိုင်ယာလန်ရှိ Apple ၏အနာဂတ်ဒေတာစင်တာသည်Resရိယာတွင်နေထိုင်သူများအကြားအရည်ကြည်ဖုများဖြစ်ပေါ်စေသည်